PSJTV | केदारनाथमा मोदीको तपस्याः गुफामा कि होटलमा ?
केदारनाथमा मोदीको तपस्याः गुफामा कि होटलमा ?
लोकसभा निर्वाचनमा अन्तिम चरणको मतदानअघि भारतीय प्रधानमन्त्री केदारनाथ पुगे र तपस्यामा बसे । उनले त्यहाँको एउटा गुफामा १७ घण्टा तपस्या गरेको बताइएको छ ।
विपक्षी दलहरुले मोदीले मौन अवधिमा भ्रमण गरेर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा उजुरीसमेत दिए । मोदीको तपस्या केहीदिनपछि फेरि चर्चामा आएको छ, यसपटक भने उनले तपस्या गरेको ठाउँलाई लिएर चर्चा भएको हो । गुफामा तपस्या गरेको भनिए पनि उक्त स्थान कुनै सुविधासम्पन्न होटल भन्दा कम नभएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गढवाल मण्डल विकास निगम मातहत रहेको यो गुफाको नाम रुद्र ध्यान गुफा हो, जसलाई विकास निगमको वेबसाइटमा होटलसमेत भनिएको छ ।
यो गुफाभित्र बिजुली, पिउने पानीको व्यवस्था छ । बिहान चिया, नास्ता, दिउँसो खाना, साँझ चिया र राती खानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । खानाको समय नियमित भए पनि अनुरोध गरेमा समय बदल्न पनि सकिन्छ । यो गुफा एकपटकमा तीन दिनका लागि ‘बुक’ गर्न सकिन्छ, जसको मूल्य करिब १६ सय रुपैंया पर्छ ।
एकदिवसीय विश्वकपमा इङ्ल्याण्डको सर्वाधिक उच्च योगफल
डोरियन आँधीका कारण फ्लोरिडामा संकटकाल घोषणा
13th Jun 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडौं: संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको भर्ना रद्द गर्न दिएको निर्देशनपछि समेत आवेदन लिने क्रम नरोकिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार बुधबारसम्ममा झन्डै १ लाखको आवेदन परेको ...
काठमाडौं: युरो क्वालिफिकेसनको लागि मंगलबार राति सम्पन्न खेलमा स्पेनले स्विडेनलाई ३–० को गोलअन्तरले हराएको छ। सेन्टियागो बर्नबेउका भएको खेलमा पेनाल्टिबाट २ र एक सिधा गोल गरिएको थियो। पहिलो हाफमा कुनै गोल हुन ...
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण नटुंगिँदै ‘राजनीतिक कार्यदिशा’लाई लिएर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच मतभेद तीव्र बनेको छ। तत्कालीन एमालेसँग नजिक अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरु ‘जनताको बहुदलीय ...